"मुद्रा" को अवधारणा आधुनिक संसारमा दुई दृष्टिकोण बाट देख्न सकिन्छ। पहिलो - एकाइ कुनै पनि राज्य जो द्वारा मापन पैसा छ। दोस्रो - बैंक टिप्पणी।
सामान्यतया, यो शब्द pronouncing मतलब ठ्याक्कै नोट। उदाहरणका लागि, जब उनि भन्छन् "रूसी मुद्रा बलियो बनायो।" यो रूसी रूबल जस्तै अमेरिकी डलर रूपमा अन्य पैसा तुलनामा बलियो भएको छ भन्ने हो।
हामी सबै मुद्रा संकेत आए जहाँ कुरा भने, यो मूल्य को पूर्वर्शत साधारण सट्टापट्टा थियो उल्लेख छ। सरल मामलामा, सट्टापट्टा एक वस्तु को विनिमय छ। पैसा को आगमन अघि मान्छे बस ऊन, खाना र अन्य सामाग्री सामान साटासाट गर्ने छन्।
व्यापार को विकास मा केहि लागि साटासाट गर्न सकिएन जो यस्तो उत्पादन, आवश्यकता भयो। यस सन्दर्भमा, यो बहुमूल्य धातु लागि सामान आदान प्रदान गर्न, लोकप्रियता हासिल गर्न थाले। व्यापार प्रयोग भएको थियो, मुख्य रूप, चाँदी र सुन - एक धातु जसको मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रह्यो।
कुनै विशिष्ट फारम थियो भएकोले व्यापारीहरु आफ्नै क्याच सुन र चाँदी सिल्लियां को रूप मा, जो मा धातु नमूनाको वजन दर्शाउन थाले। कारण धोखाधडी को ठूलो संख्यामा कार्य बिस्तारै सार्वजनिक अधिकारीहरु गर्न थाले।
प्राचीन चीन मा बैंकनोट्स
वैज्ञानिकहरूले कागज मुद्रा को पहिलो प्रकारका प्राचीन चीन मा प्रयोग भन्ने विश्वास गर्छन्। युरोप मा, यस्तो मुद्रा सामान र बहुमूल्य धातु को स्वीकृति वा भण्डारण लागि रसिद को रूप मा देखा पर्न थाले।
कागज मुद्रा को ठूलो उत्पादन तिर पहिलो चरण फ्रान्सेली वित्त मन्त्री गरे Dzhon लो, देश को धन वृद्धि गर्न XVIII सताब्दी को सुरुमा बैंकनोट्स, छैन पुष्टि सुन स्रोतहरू छाप्न निर्णय गर्ने। आफ्नो विचार असफल भयो।
यो कारणले गर्दा कागज पैसा को मात्रा सुन रिजर्व र देश मा सामान को मात्रा पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई भयो।
यो राय हुनत आज दुइटा छ। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध को समय देखि, देश सुन र अमेरिकी डलर, पूर्ण सुन स्टक समेटिएका र सुनिश्चित भएको थियो जो संलग्न छैन बन्न निर्णय नगद प्रवाह सबै विदेशी विनिमय लेनदेन संसारमा।
तर 1964, संयुक्त राज्य अमेरिका मा उत्पादित डलर मुद्रा संकेत संख्या, देश को सुन र विदेशी मुद्रा भंडार को मात्रा पुग्यो जब मा, यस्तो मुद्रा सुरक्षा प्रणाली असफल भयो।
मिति, मुद्राहरू को कुनै पनि सुन रिजर्व गर्न pegged छैन। स्तर र तिनीहरूलाई मूल्याङ्कन विशेष शासित गरिनेछ आपूर्ति र माग द्वारा मुद्रा बजारमा।
दुनिया मा सस्ता मुद्रा
विश्व बैंकनोट्स प्रशस्त मात्रामा यो बाहिर फैलाउने त विशाल र विशाल छ। सबैलाई अमेरिकी डलर, यूरो, rubles परिचित छ। तर कम साधारण केही मुद्राहरू छन्, र तिनीहरूलाई लागि माग धेरै कम छ।
उदाहरणका लागि, यो दुनिया मा सस्ता मुद्रा छ - यो भियतनामी दांग छ। विश्वास छैन, तर तपाईं रुबल यसलाई तुलना भने, एक भन्दा कम रूसी kopek एक लागत एक यस्तो मुद्रा छ (को रुबल को अनुपात बारेमा 0,0016 दल्नु एक दांग लागि।)।
के संसारमा सस्ता मुद्रा छ कुरा, यो इरान गरेको वास्तविक बारेमा उल्लेख छैन असंभव छ। को रुबल आफ्नो सम्बन्ध 0,003 rubles गर्न लगभग बराबर छ। एक वास्तविक लागि। यो कम लागत अनन्त संघर्ष र पश्चिमी देशहरूको प्रतिबंध कारण। गणना को मुख्य माध्यम वास्तविक छैन, र रूपमा तथापि, इरानी अधिकारी, विरक्तलाग्दो छैन तेल रिजर्व देश पनि धेरै वर्ष को लागि पर्याप्त हुन्छ।
को इरानी वास्तविकताहरु जस्तै हामी दुनिया मा सस्ता मुद्रा को domra छ भन्न सकिन्छ। सायद, यो बारेमा र सुनिन। साओ टोम र प्रिन्सिपे को गणतन्त्र प्रयोग मुद्रा। रूबल भन्दा कोर्स वास्तविक कि रूपमा लगभग एउटै।
मुद्रा बजारमा सम्बन्ध
संसारका सबै मुद्राहरू परस्पर छन्। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आदानप्रदान को पर्याप्त संख्या हो जो मा खरीद र विभिन्न देशहरूमा मुद्रा बिक्री प्रक्रिया। को पूर्वानुमान मुद्रा विनिमय दर को Timeliness र शुद्धता यस्तो अपरेसन मा वित्तीय संस्थाहरू गर्न अनुमति दिन्छ।
यस्तो आदानप्रदान मा व्यापार एक आसान काम छ। तपाईं सधैं वैश्विक समाचार सजग हुन र बैंकनोट्स को मूल्य असर कि कारक बुझ्न पर्छ। विनिमय दर एक पूर्वानुमान गर्न, तपाईंले कसरी मार्ग सम्भावित गलियारे, र यसको परिवर्तन सम्भावित कारण थियो जो बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ। साथै, तपाईंले त्यहाँ ठिक अप्रत्याशित संक्षिप्त वा मूल्यांकन हुन्, भाग्य को एक निश्चित रकम अधिकार हुनुपर्छ।
बेलारुस मा मुद्रा के हो?
प्रारम्भिक 1990 मा, सोभियत मुद्रा देखि देश को विफलता पछि, त्यहाँ थियो को बेलारूसी रूबल। सरकार नीति पूर्ण दर कायम राख्न उद्देश्य थियो। उदाहरणका लागि, 2004-2008 मा, पुरा तरिकाले को रुबल विनिमय दर अन्य मुद्राहरू को सम्बन्ध मा परिवर्तन गरियो। यो विभिन्न तंत्र द्वारा हासिल गरेको थियो।
यो Rubles बेलारुस मा मुद्रा, बैंकनोट्स को संप्रदाय को एक विस्तृत विविधता छ पनि 200 हजार विचारणीय छ।।
UAH - मुद्रा कस्तो? युक्रेन राष्ट्रिय मुद्रा
एउटा सुन्दर माधुर्य सिङ कसरी विस्थापन गर्न? "मेगाफन" जवाफ थाह
कसरी पुस्तक गरे। पहिलो पुस्तक गर्दा